Home » Akụkọ ụgbọ elu » Tù Lufthansa na BASF na-emepụta teknụzụ sharkskin
N'iji okike dị ka ihe nlereanya, ụlọ ọrụ ụgbọelu anọwo na-enyocha ụzọ siri ike iji belata ịdọrọ ikuku maka ọtụtụ afọ
Lufthansa Technik na BASF nwere ihe ịga nke ọma n'ime ọganihu dị ka akụkụ nke ọrụ njikọta
AeroSHARK bụ ihe nkiri dị elu nke na-egosipụta ọmarịcha usoro nke akpụkpọ anụ shark
AeroSHARK ga-apụ na ụgbọ mmiri Lufthansa Cargo na 2022
Na-eme ka nkwụsi ike nke ụgbọ elu dị na mbara ala dị ala, na-eme ka mmanụ ọkụ belata. N'iji okike dị ka ihe nlereanya, ụlọ ọrụ ụgbọelu na-enyocha ụzọ siri ike iji belata ikuku ikuku ruo ọtụtụ afọ. Ugbu a Lufthansa Technik na BASF enweela ihe ịga nke ọma n'ime ọganihu dị ka akụkụ nke ọrụ nkwonkwo. AeroSHARK, ihe nkiri di n’elu nke na - ejuputa usoro di nma nke akpukpo azu shark, ka aga-ebupute n’ụgbọ mmiri Lufthansa Cargo nke dum site na mbido 2022, na - eme ka ụgbọ elu ahụ nwee akụ na ụba ma na-ebelata anwuru.
Ọdịdị dị elu nke nwere riblets ndị dị ihe dị ka micrometers 50 na-eitomi njirimara nke sharkskin ma yabụ na-akwalite mbara igwe na akụkụ metụtara ụgbọ elu ahụ. Nke a pụtara na obere mmanụ dị mkpa n'ozuzu. Maka ndị na-ebu ibu nke Lufthansa Cargo's Boeing 777F, Lufthansa Technik na-eme atụmatụ mbelata nke ihe karịrị otu pacenti. Maka ụgbọ elu iri nke ụgbọ elu iri, nke a na - echekwa ego kwa afọ nke ihe dị ka tọn 3,700 nke kerosin na ihe dị n'okpuru tọn 11,700 nke ikuku CO2, nke bụ nha nke ụgbọ elu 48 na-ebu ibu site na Frankfurt ruo Shanghai.
"Ọrụ dịịrị gburugburu ebe obibi na ọha mmadụ bụ isi okwu dị mkpa maka anyị," ka Christina Foerster, onye otu ndị isi oche nke Deutsche Lufthansa AG nwere ọrụ maka nkwado. “Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile n'iwebata teknụzụ ndị na-emebi gburugburu ebe obibi. Ihe oru ohuru a na-acho sharkskin nke ugbo elu na-egosi ihe ndi oru ike na ndi ohuru ohuru nwere ike nweta otu. Nke a ga-enyere anyị aka iru ihe mgbaru ọsọ anyị nke nnọpụiche ihu igwe ka ọ na-erule 2050. ”
“Industrylọ ọrụ ụgbọelu na-eche ihe ịma aka ndị yiri nke ahụ na ụlọ ọrụ kemịkal: a ga-enwerịrị ọganihu na-aga n’ihu na nchedo ihu igwe n’agbanyeghi oke ike chọrọ. Site na imekorita ihe nke oma na imekota ihe omuma anyi na uzo elu, anyi enweela ihe ịga nke oma n’iru n’ihu. Nke a bụ ihe atụ magburu onwe ya nke nkwado na omume, na-enweta site na mmekorita na-arụkọ ọrụ ọnụ na teknụzụ ndị ọhụrụ, "ka Dr. Markus Kamieth, onye otu Board of Executive Director of BASF na-ekwu.
“Anyị nwere obi ụtọ na anyị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ụgbọ mmiri anyị niile na-ebu ụgbọ mmiri karịa ịrụ ọrụ nke ọma n’ọdịniihu site na teknụzụ sharkskin ma belata akara ụkwụ carbon nke ụgbọ mmiri anyị nke oge a. Ulo oru mbo a anyi meputara na AeroSHARK na Lufthansa Cargo jiri nlezianya gosiputa ntinye anyi na ebumnuche mmepe mmepe nke United Nation na ihe omume ihu igwe.
Dorothea von Boxberg, onye isi oche nke Lufthansa Cargo AG.